Mivoaka Ny Trano Fidiovana: Haiti Sy Ny Andro Manerantany Ho An’ny Lavapiringa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Desambra 2012 13:11 GMT
Vakio amin'ny teny 日本語, Español, polski, 繁體中文, 简体中文, English
19 novambra ny Andro iraisam-pirenena amin'ny fampiasana Lavapiringa. Ao anatin'ny mponina eran-tany 7 lavitrisa, 2,5 lavitrisa ny olona tsy afaka mampiasa lavapiringa madio – izany hoe olona 1 amin'ny 3. Ny sasany amin'izy ireo dia mipetraka any Karaiba; maro amin'izy ireo mipetraka any Haiti – ary ny tsy fisian'ity zo fototra mahaolona momba ny fidiovana ity no mbola mampirongatra ny aretina sy ny fahafatesana amin'ny tsy antony. Ny tanjon'ny fankalazana ny Andro iraisam-pirenena amin'ny fampiasana lavapiringa dia ny hamongorana ny fady manodidina ny lavapiringa sy ny fidiovana, ary hanaitra amin'ny fanamby miandry amin'ny fitaovam-pidiovana efa misy. Ho fanohanana ny fikelezan'aina (toy ny ataontsika ato [mg]) sy ho famoriana olona manodidina ilay fampielezan-kevitra hoe “Mangery aho, ary ianao?” , ity lahatsoratra ity dia manao jeri-todika ny tsy fisian'ny zavatra heverintsika fa efa ananana – toerana manokana hanaovanao ny raharahanao – no nampisy fiantraikany tamin'ny fiainana ao Haiti.
Ity Nosy ity, mazava ho azy, dia manana fanamby maro dia maro ifampizaràna: ny loza voajanahary, ny lehibe nandrava farany teo zao dia ny horohorontany tamin'ny 2010 sy ny rano maloto naterak'izany , tatitra amin'ny fanjavozavoan'ny fandehan'ny volan’ ireo Fikambanana Mpanao asa soa, ireo “fanampiana” mampiahiahy izay natahorana handetika lalina ny tolona ataon'ny firenena amin'ny sehatra fambolena, miaraka amin'izany ny voka-dratsin'ny rivo-doza sy ny fihanaky ny kolera taorian'ny horohorontany izay nampiakatra ny isan'ny maty. Herintaona mahery kely izay, nomarihan'i Dying in Haiti ny tsingerintaona voalohany amin'ny fihanaky ny kolera:
Tamin'ny Oktobra 2010 nanomboka nihanaka ny kolera ka nahafaty Haisianina maro.
Efa heritaona izao no nitrangan'izany ary ny antontan'isa voatahiry no milaza fa 500.000 ireo Haisianina tratran'ny Kolera ary 6.500 no maty tamin'izy ireo. Tena maro izany miohatra amin'ireo toeran-kafa manerantany. Ao anatin'izany India, Afrika, na aiza na aiza…
Ny rano maloto no tena fositra. Ary efa ela no ratsy mihitsy ny rano na dia talohan'ny horohorontany tamin'ny 2010 aza. Ary dia voalaza fa ny rano aty no tena ratsy indrindra tamin'ny taona 2002….
Izay no antony anankiray nanomezako anarana izao bilaogy izao hoe Dying Haiti 6 taona lasa izay. Rano maloto…
Ity lahatsoratra ity dia nanonona ny lahatsoratry ny filazam-baovao lehibe izay nanazava:
Ny kolera dia vokatry ny otrik'aretina hita ao anaty rano na sakafo misy aretina. Miparitaka haingana amin'ireo toerana tsy ara-pahasalamana, ary mety mahafaty olona haingana dia haingana amin'ny fanarian-drano manontolo, nefa mora tsaboina raha voatily ara-potoana..
Efa ela no nijaly tamin'ny tsy fahampian'ny fanadiovana vokatry ny fahantrana i Haiti nefa mbola niharatsy hatrany ireo fepetra momba ny fanadiovana tan-drenivohitra sy ireo toerana hafa manodidina taorian’ ilay horohorontany tamin'ny taona lasa izay nanery ireo olona an'arivony hanangana fialofana vonjimaika eny amin'ny kianja, na toeram-pilalaovam-baolina na aminà faritra fivezivezen'ny olona eny rehetra eny.
Tamin'ny toeram-pivoahana 12.000 nilaina, dia teo ho eo amin'ny ampahatelony ihany no azo nampiasaina ny volana Aogositra, nihena ho 5800 izany ny volana teo alohany, hoy ny Biraon'ny fandrindrana ny Fanampiana. Mandritra izany fotoana izany, nitombo avo roa heny ny isan'ireo toeram-pivoahana tsy azo ampiasaina intsony, niainga tamin'ny 1.300 tamin'ny Jolay ka hatramin'ny 2.600 tamin'ny Aogositra.
Maherin'ny 1.000 ihany koa ny toera-pivoahana nilaozan'ny olona, mitarika ny olona hangery eny rehetra eny, ka mampitombo fifindran'ny aretina amin'ireo mponina mipetraka an-toby.
Ity fihanaky ny aretina kolera any Haiti ity dia tsy mijanona amin'ny resaka fahasalamana fotsiny ihany. Fa mahatratra ny fifidianana eo amin'ny firenena mihitsy koa ary manomboka misy fiantraikany eo amin'ny fifandraisana iraisam-pirenena, tahaka ny fanoherana ny fijoroan'ny Firenena Mikambana ao amin'ny firenena. (Ny vokatry ny fihanaky ny kolera dia nolazaina ho avy amin'ireo miaramilan'ny Firenena Mikambana [mg] ao amin'ny Nosy.) Ity lahatsoratry ny Global Voices Novambra 2010 ity no manadihady ny zava-misy:
Nivadika ho aretimifindra nyfitokana-monina, ary mitombo isa isan'andro ny maty. Haiti, izay efa tsy zarizary ara-pitaovana hiatrehana ny aretina tahaka itony, no miezaka mandroso hatrany hanarina ny potika taorian'ny horohorontany tamin'ny 12 janoary lasa teo – efa ho herintaona aty aoriana, mbola mipetraka anaty trano lay foana ny ankamaroan'ny mponina.
Ho fanampin'ny fahatezerana vokatry ny fahantrana- dia mandeha ny resaka fa vokatry ny “dikin'ireo miaramila misatro-manga avy any Nepal” no nahatonga ny aretina.” Efa tsy tsiambaratelo fa ny andiany mpitandro ny filaminana fantatra amin'ny hoe MINUSTAH, no malaza amin'ny korontana any Haiti ; tena mahitsy be ny mpitoraka bilaogy amin'izay resaka izay, ary fanadihadihana vao haingana tany an-toerana no manontany raha ny “fanakorontanana” no dikan'ny tsy fankatoavana.
Amin'izay lafiny izay, ny antony nilazana fa ny MINUSTAH no nitondra ny valan'aretina kôlera tany Haiti (izay nolavin'ny Firenena Mikambana) dia rano kely nahatondraka ny ony. Raha mitombo hatrany ny marary ao Port-au-Prince renivohitra, dia mitombo tahaka izay koa ny fanoherana ny Firenena Mikambana.
Haiti Grassroots Watch nanazava:
Ny Kolera dia aretin'ny mahantra, ireo voahilikilin'ny fiaraha-monina. Olona mahantra ao amin'ny Firenena mahantra. Ny Kolera dia mihombo eny amin'ny toerana misy rano maloto, eny amin'ny toerana tsy misy fidiovana ara-dalàna, eny amin'ny toerana tsizarizary ny rafi-pahasalamana.
Na dia mazava aza ankehitriny fa heverina ho ireo miaramilan'ny Firenena Mikambana no mety nitondra ny Kolera Vibrio tao Haiti, ary mazava ihany koa fa ny fandraisan-tànana ny fahasalamana, ny fahazoana rano madio sy fanadiovana, ny fizàrana ho madio amin'ny fikarakarana ary ny fanaovana vaksiny dia mety hampisintaka lavitra ny aretina, fa ny tsy mazava dia ahoana no fomba hahatongavana amin'izany rehetra izany kanefa mandram-pahatongan'izany efa an'arivony maro no maty.
Ary raha montsana koa aza ny kolera, aretina ampolony hafa indray no mitatao amin'i Haiti. Araka ny hevitry ny Fikambanana Iraisam-pirenena momba ny Fahasalamana, 1,4 tapitrisa no olona maty isan-taona vokatry ny aretina azo avy amin'ny rano maloto – eo amin'ny olona 4 isa-minitra – ny ankabeazany dia vokatry ny rano tsy voaaro sy ny fanadiovana tsy manara-penitra.
Haiti Grassroots Watch dia nanapa-kevitra hanadihady ny ahoana sy ny inona ny amin'ny ‘fikatsoana’ sy ‘fitohanana’ ny amin'izao toe-java-misy izao ary nanontany
• Nahoana no mora azo ny kolera ?
• Nahoana ny Haisianina no tsy mahazo rano madio sy fidiovana manara-penitra ?
• Ary raha ireo 164 tapitra dolara avy amin'ny Fikambanana Iraisam-pirenena izay notadiavina no voaangona ka voafongotra ny Kolera, ahoana no hahafahana manakana ireo aretina hafa azo amin'ny rano maloto tsy handrakotra ny firenena?
Ity lahatsoratra ity dia tsy ahafahana mamaly izany fanontaniana izany, fa entina kosa hanampiana ny fanaparitahana ireo vaovao ilaina amin'ny famonjen'aina amin'ny alàlan'ny hafatra an-drindrin'ilay mpitsabo/mpibilaogy Jan Gurley, izay nitsidika indroa an'i Haiti tamin'ilay horohorontany ny 12 Janoary nandritra ny fanaovana fanampiana an-tsitrapo, ary namorona lahatsary fampianarana momba ny fitsabona amin'ny alàlan'ny fisotroana rano [oral rehydration therapy-ORT] izay azony avela [omena] amin'ireo mpiara-miasa sy marary Haisiana:
ka aiza amin'izany ary ilay fankalazana ny Andro iraisam-pirenena amin'ny fampiasana lavapiringa ? Antenaina izy hanaitra ny saina, hampihetsika, ary hanao ny fidiovana sy ny fahasalaman'ny rehetra zava-misin'ny taon-jato faha-21. Afa-mandray anjara ianao amin'ny alàlan'ny fizaràna hafatra momba ny lavapiringa voaaro, fisoloana vava ho amin'ny fidiovana tsaratsara kokoa amin'ny fananganana hetsika ary mandrakitra izany hetsika izany ao amin'ny sarintanin'ny Andro Iraisam-pirenena ho amin'ny fampiasana lavapiringa, ary miteny amin'izao tontolo izao ianao hoe nahoana no mangery ianao any amin'ny Facebook sy Twitter. Farafaharatsiny afa-mieritreritra ianao fa tsy hifindra aminao ny olan'ny lavapiringan'ny hafa, tsarovy fa ireo aretina vokatry ny fidiovana tsizarizary dia mety mihanaka – indrindra eny amin'ny faritra misy lavapiringa vita tsy tao anaty fanamby. Soniavo ny taratasy fanangonan-tsonia, eto.
Trinite sy Tobago 3 andro izay
Jamaika 5 andro izay